Finfinnee daangessuu dhabuun hojii buqqaatota misoomaa Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFinfinnee daangessuu dhabuun hojii buqqaatota misoomaa
Qonnaan bultoota maqaa misoomaatiin buqqa’anii jireenya hiyyummaa keessa galan deeggaruufi buqqaatii kana boodaa ittisuuf sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Ejensiin Dhimma Hawaasa Buqqaatota Misoomaa erga hundaa’ee wagga sadii guteera.
(bbcafaanoromoo)–Ejensichi erga hundaa’ee waggaa sadii haa ta’u malee hojii qabatamaa mul’atu garuu hin hojjenne.
Naannoo Oromiyaa keessatti namoota maqaa misoomaatiin buqqa’an abbootii warraa kuma 90 ragaa walitti qabneerra jedhu direektarri ejensichaa Obbo Dachaasaa Beekaa.
Kana keessaa harki caalu ammoo Oromoota magaalaa Finfinnee fi naannawa Finfinnee irraa buqqa’ani jedhan.
Qonnaan bultoota Oromoo maqaa misoomaatiin buqqa’anii gadadoof saaxilaman hunda lakkaa’anii beekuun matuma isaanuu hojii ulfaataadha jedhu Obbo Dachaasaan.
Hojii namoota naannawa Finfinnee irraa buqqa’anii rakkoof saaxilaman kanneen adda baasuu fi deeggaruu irratti rakkoo guddaan, daangaan bulchiinsaa Oromiyaa fi kan magaalaa Finfinnee adda bahuu dhabuu dha jedhu.
“Daangaa bulchiinsaa sana beeknee nutillee gahee keenya keessaa qooddannee irratti xiyyeefannee hojjechuu hin dandeenye” jedhu.
Waa’een daangaa adeemsarra jira kan jedhan Obbo Dachaasaan, “gaafa kuni xumurame kana caalaa hojjechuu ni dandeenya” jedhu.
“Osoo daangaan adda bahee, hundumtuu xumuramee, ati kanaa achi ani kanaa asi kan jedhu sun jiraatee gaariidha.”
Hangasitti ejensii buqqaatota kan magaalaa Finfinnee waliin mariin hojjetaa jirra jedhu Obbo Dachaasaan
‘Rakkoon qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee irraa buqqa’anii kan diinagdee qofa miti’
Ejansichi buqqaatota misoomaa kanneenif deeggarsa liqii dhalarraa bilisa ta’e kennuuf Waldaa Aksiyoona Liqii fi Qusannaa Oromiyaa waliin waliigaltee mallatteesseera.
Akkaataa waliigaltee kanaatiin dhalli liqii kanaa ejensichaan kan kaffalamu yoo ta’u buqqaatonni maallaquma liqeeffatan qofa ittiin hojjetanii deebisu.
Akka Obbo Dachaasaan jedhanitti rakkoon qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee irraa buqqa’anii kan diinagdee qofa miti.
“Afaan, aadaaniifi eenyummaan sabummaasaa amma baduutti gahe jira. Kun akka dhalataa Oromoo tokkootti waan nama gaddisiisuudha” jedhu.
‘Lafa keenyas dhabnee ijoolleen keenyas daandii irratti hafte’
Iddoowwan akka Boolee Bulbulaa fi Koyyee Facceetti wanti qonnaan bulaa Oromoorra gahe, Oromoon miidhama akkamii akka Finfinnee keessatti dabarse kan namatti mul’isudhas jedhu.
Ejensicha keessaa dameen tokko dhimma eenyummaa fi duudhaa irratti kan hojjetudha jedhu obbo Dachaasaan.
Kanaaf wanti amma hojjennu dinagdeen alatti eenyummaafi hariiroon hawaasummaa sababa kanaan akka hin banne gochuudha jedhaniiru.